माघ १५ सम्म यी राशिलाई मिल्नेछ शुक्रको साथ ! जीवनमा परिवर्तन हुने ! कुन राशिलाई कस्तो असर पर्छ
ज्योतिष शास्त्रीहरुका अनुसार जनवरी २ को दिन शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरिसकेको छ । जनवरी २ राति ८ बजेर ५४ मिनेट देखि शुक्र ग्रह वृश्चिक राशिमा प्रवेश गरेको हो । साथै शुक्र अब आउने २९ जनवरीसम्म वृश्चिक राशिमा हुनेछ। यस अवधिभर शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तनको कारण कुन राशिलाई कस्तो असर पर्छ: